စေတနာမပါသော ဘော်လုံးပွဲတစ်ပွဲပြီးစီးသွားခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » စေတနာမပါသော ဘော်လုံးပွဲတစ်ပွဲပြီးစီးသွားခြင်း
Posted by အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ/ သန်းထွဋ်ဦး on Nov 27, 2011 in Business & Economics, Complaint / Claim | 14 comments
မြန်မာအသင်းကခုဆီးဂိမ်းမှာ အားသွန်ခိုက်စိုက်နဲ့ ကစားရင်း၊လှေလှော်ရင်းတက်ကျိုးသလို မမျှော်လင့်ပါဘဲ ဗိုလ်လုပွဲဝေးရတယ်လို့ ဘဲပြောပြော၊ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ လိုနေတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်ဗိုလ်လုပွဲနဲ့ လွဲတယ်ပြောပိုမှန်မယ်ထင်ပါတယ်။အနီးစပ်ဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့ အိုမန်နဲ့ ပွဲမှာ အိမ်ရှင်ဖြစ်နေရဲ့ သားနဲ့ ကျေပွန်လိုက်တဲ့တာဝန်ဗျာ၊ဧည့်သည်အသင်းကိုပေးလိုက်တဲ့မေတ္တာတွေက ရေဗူးတွေ၊လောက်လေးတွေ၊ဖိနပ်တွေစုံနေတာပါဘဲ။ဒါက ပွဲကြိုက်သူတွေရဲ့ အပြုအမူတွေ၊ဒါပေမယ့် သူ့ မြေကိုယ့်မြေကစားကြတဲ့နေရာမှာ သူတို့ ဆီသွားကစားတော့လဲ အနည်းနဲ့ အများတော့ ဘက်လိုက်တာ၊တို့ တာလေး၊ဆော်တာလေးမရှိဘူးမပြောလိုပါဘူး။ကိုယ့်နိုင်ငံသားနဲ့ ဆိုမနိုင်မှာစိုးလို့ မွေးစားသားတွေတောင်ခေါ် ကစားနေရတာလေဗျာနော့။
ပြောရင်းနဲ့ ဝေးသွားတယ်ဗျာ၊ ယနေ့ ကျင်းပနေတဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်တဝက်ပါတဲ့ MNL မှာတောင်မှ အာမခံချက်မရှိတော့လို့ကိုယ့်ဌာနပြန်ကစားနေတဲ့ ဘောလုံးသမားတွေရှိတယ်။ပြောချင်တာက မြန်မာ့ဘောလုံးလောက ယိုယွင်းပျက်စီးနေတာ ဘယ်ခါမှခေါင်းထောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ တောင်ထင်မိတယ်။ဆိုလိုတာက လူတွေရဲ့ အားကစားပေါ်မှာ မြင်တဲ့အမြင်တော်တော်လေးပြောင်းလဲသွားပါပီ။တကယ်ပါဘဲ အားမှကစားလို့ ရတဲ့အားကစားဖြစ်သွားပါပီ။နေ့ စဉ်ဖြတ်သန်းနေထိုင်ရတဲ့ လူသားတွေကကိုယ့်ဝမ်းရေးကို ပိုဦးစားပေးနေရတာ၊ဝါသနာကိုဦးစားပေးရင် အိမ်မှာစားစရာမရှိဖြစ်နေမယ်။
အားပေးတဲ့သူကလဲအားတော့ပေးပါရဲ့ ဗျာ၊မစို့ မပို့ နဲ့ လှောင်ပြုံး ပြုံးရမယ့် ဆုငွေလေးနှစ်ပဲတစ်ပြားရယ်ပါ။မတော်လို့ ကျိုးမယ်ကန်းမယ်၊နာမယ်၊ဖျားမယ် မည်သူမျှတာဝန်မယူ၊ဝါသနာပါလို့ သာကစားနေရတာဘယ်သူမှအားခွန်ကုန်အောင်မသုံးဘူး၊တကယ်အစွမ်းအစရှိတဲ့ ဦးနှောက်သုံးကစားတတ်တဲ့ ကစားသမားကောင်းတွေ ဘယ်သူမှမကစားတော့ဘူး။
ပြောတော့ပြောမိပါပီနည်းနည်းတော့လိုရင်းလေး နဲ့ ဝေးသွားပီလားမသိဘူး။တောင်းပန်ပါတယ်. သီးခံဖတ်ရှုကြပါ။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က ဘောလုံးအားကစားကို ဝါသနာပါလေတော့ တခြားအားကစားနည်းတွေပေါ်အာရုံလျော့ပြီး မပြောလိုရင်းမဟုတ်ပါ။ပြောရင်လွမ်းစရာ၊နှမျောစရာပေါ်လာလို့ ပါ။တကယ်ကိုနှမျောဖို့ ကောင်းတဲ့အားကစားနည်းတစ်မျိုးက ခုချိန်မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အမျိုးသားတွေဆီးဂိမ်းမှာဝင်မပြိုင်ဖြစ်တာ ကြာနေပီဖြစ်တဲ့ ဘတ်စကက်ဘောပါ။၁၉၉၆-၂၀၀၀ လောက်ထိ ကျွန်တော်တို့ ပွဲကြည့်ကလေးတွေမှတ်မိသလောက်ပေါ့ အဲဒီချိန်က မြန်မာ့လက်ရွေးစင်တွေဖြစ်တဲ့
သူတို့ ကစားသွားတဲ့ ဘတ်စက်ဘောကွင်းက ခုမြေကြီးနှုန်းမြေအောက်သုံးပေလောက်မြုပ်သွားလိုက်တာ တကယ်ကိုကစားနည်းပါ မြေမျိုသလိုမျိုသွားပါလေရောလား။အဲဒါကြောင့်အကြိမ်ကြိမ်နှမျောမိပါတယ်။နိုင်ငံနဲ့ အဝန်း အားလုံးချွတ်ခြုံကြနေမယ်ဆိုတာကိုလဲယုံပါတယ်။
ဒီပို့ စ်ကိုရေးဖြစ်ဖို့ ရည်ရွယ်မိတာက ကျင်းပပြီးစီးသွားတဲ့ မြို့ နယ်ပေါင်းစုံဘောလုံးပွဲ သတင်းလေးကနေ ရှေ့ ဆက်နိုင်ငံအားကစားအတွက် ပိုစိုးရိမ်စရာကောင်းစရာသွားတွေ့ မိလို့ ပါ။ဒီကနေ့ နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲကို ဒွါရာဝတီ အားကစားပြိုင်ကွင်းကြီးမှာ သံတွဲမြို့ နယ်အသင်းနဲ့ ဂွမြို့ နယ်အသင်းတို့ ကစားကြတာပါ။သံတွဲအသင်းက၂;၀ နဲ့ အနိုင်ယူပြီးလက်ရှိချန်ပီယံဆီက နေဆုဖလားပြန်လုယူနိုင်လိုက်တာပေါ့။
သံတွဲအသင်းကအနိုင်ရသွားပေမယ့် ကျွန်တော်မပျော်မိပါ။ဝမ်းသာနည်း၍ခံစားရတာတမျိုးပါ။အနိုင်ရသံတွဲ အသင်းကို ဆုကြေးငွေ(၁၅၀၀၀၀)နဲ့ တဦးချင်းဆုတံဆိပ်အပါအဝင် ဆုဖလားကြီးပေါ့ဗျာ။ဒုတိယရတဲ့အသင်းက ဆုငွေ(၁၀၀၀၀၀)နဲ့ ဆုတံဆိပ်ပေါ့ဗျာ။ဒီနေရာမှာ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာက မြို့ နယ်ခွဲနှစ်ခု(မအီ၊ကျိန္တလီ)၊ကျန်မြို့ နယ်သုံးခု(သံတွဲ၊ဂွ၊တောင်ကုတ်)အသင်း(၅)သင်းယှဉ်ပြိုင်ကစားကြတဲ့ပွဲ မှာ ပေးလိုက်တဲ့ဆုတွေ၊ချီးမြှင့်လိုက်တဲ့ငွေသားတွေ ဗျာ သူတို့ တွေ စားသောက်နေတဲ့ အရက်ဖိုး၊စားသောက်ဆိုင်၊အမျိုးမျိုးသောစားပွဲသောက်ပွဲ၊Dinner ပွဲတွေမှာမျိုဆို့ နေတဲ့စရိတ်လောက်တောင်မရှိလေတော့။
တကယ်တော့မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အသင်းကိုမွေးထုတ်ပေးမယ့် အောက်ခြေပွဲတွေမှာ တကယ်ထူးချွန်တဲ့အားကစားသမားတွေကိုချီးမြှောက်ကြတဲ့နေရာမှာ စေတနာပါဖို့ လိုပါတယ်။အားပေချီးမြှောက်မှုများလေ ပါဝင်ဆင်နွှဲသူများရဲ့ ဝါယမစိုက်ထုတ်မှုများလေမို့မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အသင်းတိုးတက်စေချင်ရင်တော့ အောက်ခြေမြို့ နယ်တွေမှာ ခုလိုဟန်လုပ်ပြနေတဲ့ပွဲတွေကို အမှန်အကန်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ လိုနေပီဆိုတာ သိအောင်ရေးပြလိုက်ပါတယ်။
အွင် . . လာ လာချေပြီ .. ဂလု .. နာကြောက်တယ်ဝေ့ . . ၊
တိုင်စာတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော် …၊
ဆက်၍သည်းခံ ပါလော့ အကိုလေး …။ (စိတ်ထိန်း)…၊
ဟုတ်တယ်နော် ဟိုးအဝေးကြီး မိုင်(၈၀)ကျော်ကနေ တကူးတကပွဲမကန်မီကနေလာနေရတဲ့ ဂွအသင်းဆို
သူတို့ ရတဲ့ ဆုကြေးငွေတစ်သိန်းက နှစ်ရက်စာအသုံးစရိတ်လောက်ဘဲရှိမှာ။ပွဲမကစားမီကနေပွဲပြီးတဲ့ထိ ဆယ်ရက်အတိုင်းအတာမှာ
ဘောလုံးပွဲဖြစ်လို့ စားပွဲသောက်ပွဲ၊Dinner ပွဲ ရှိတာ မဟုတ်ဘူးဟေ့၊ စားပွဲသောက်ပွဲ၊ Dinner ပွဲဖြစ်ဖို့ ဘောလုံးပွဲရှိတာ။
မလောက်မငှ၊စေတနာမပါသောဆုကြေးငွေဆိုတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးဂိုးသမား၊နောက်တန်း၊အလယ်တန်းနဲ့ ရှေ့ တန်း
ဆိုပြီးဆုငွေ(၂၀၀၀၀)စီပေးတယ်လေဗျာ။အဲဒီတော့ ပင်ပန်းခံပြီးအားကျိုးအားတက်ကစားသူတွေကို ဆင်ပါးစပ်နှမ်းပက်သလိုဖြစ်မနေဘူးလား။
ကျနော်တို့ ရွာအသင်းတွေ တောင်ဖက်က ရေကျော်တို့ ကြွေဂျိုင်တို့ မှာသွားကစားတာ ပထမဆု(၅)သိန်း၊ဒုတိယဆု(၃)သိန်းပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါတောနယ်တွေမှာခြေဗလာကန်တဲ့အပျော်ပွဲသာသာလေးပါ။ခုလိုမြို့ နယ်အဆင့်ပွဲတွေမှာ ဆုကြေးငွေနည်းလွန်းတာက ပွဲလုပ်ရုံလုပ်ပြတဲ့သဘော
ဖြစ်နေပီ။အားကစားကတော့ ကမ္ဘာကျော်မကျော်မသိတော့ဘူး။တော်တော်ပျက်နေပီလို့ ဆိုရမယ်ကွာ။
စိတ်ပျက်တယ်ဗျာ နှစ်စဉ် တို့ ပင်လယ်နားအသင်းတွေ ဗိုလ်လုပွဲတက်နေကြမဟုတ်လား။တို့ ဆီက
ကလေးတွေ ကစားရဖို့ ပိုအခွင့်အရေးရသင့်ပါတယ်။ခုတော့ အသုံးစရိတ်ချွေတာတယ်ဆိုပြီး
မြို့ ပေါ်က ကလေးတွေကိုဦးစားပေးခေါ်တယ်။အသင်းအောင်နိုင်ရေးအတွက် အသုံးစရိတ်ငွေ (၂၄)သိန်းကို
၂၈ ရက်နေ့ ညနေ(၆:၃၀)ထိမြို့ ထဲမှာအောင်နိုင်ရေးဆုငွေတောင်းခံဖို့ လှည့်လည်နေကြတယ်ပြောသံကြားရတယ်။
ဒီဆုငွေတွေကိုရော ကစားသမားတွေအတွက်အသုံးမချပါဘဲ အလွဲသုံးစားလုပ်ကြအုံးမှာလား။ဒီလိုဆိုမှဖြင့်
ကစားသမားတွေကို တောင်းစားခိုင်းနေသလို ဖြစ်သွားမှာလေဗျာ။
ကိုသာဘော်ခင်များ ယခုလိုကစားသမားကျွန်တော့်ရဲ့ ကစားဖော်လေးတွေ မြို့ ထဲထွက်လမ်းလျှောက်
ဆုငွေတောင်းခံကြတာက သူတို့ တွက်အောင်ပွဲခံပျော်ပွဲရွှင်ပွဲလေးလုပ်ချင်ကြတာရယ်ကြောင့်ကလေးတွေ
လုပ်ကြတာပါ။သူတို့ ကိုကူညီပြီး သံတွဲ-တောင်ကုတ်ကားလိုင်းက ကားတစ်စီးဆိုကိုယ့်ဆီကိုယ်ထည့်ပြီး
တစ်မြို့ လုံးအောင်ပွဲခံလိုက်ပို့ ပေးနေတာပါ။အကိုတို့ ပြောသလို လောက်တော့ မဆိုးလောက်ပါဘူးလို့ 
အင်း…. အရာရာ အားလုံးတွေဟာ စည်းလွတ်ဝါးလွတ်ဟုတ်ဟန်မတူဘူးဗျ….
စနစ်တကျနဲ့ကို ရှယ် စီစဉ်ထားတာနေမှာ…
ဘာမှ လုပ်မရတဲ့ အတူ သည်းခံလိုက်ခြင်းဟာ နှလုံးအေးသောဆေးပါ…
နင်ကလဲ ဆရာကြီးလေသံ ပေးနဲ့ ပါလား။ကိုယ့်မြို့ ကိုယ့်ရွာ ကိုယ့်နိုင်ငံအားကစားတိုးတက်ဖို့ 
သူတို့ လုပ်မှာကိုစောင့်နေလို့ မဖြစ်တော့ဘူး။တပိုင်တနိုင်လေးနဲ့ ကစားသမားတွေစိတ်ပါဝင်စားလာ
အောင် ဆွဲဆောင်ရလိမ့်မယ်။နင်ပြောသလို သီးခံရအောင် တို့ တွေကအရူးမဟုတ်ဘူး နားလည်လား။
အဖြစ်သဘောဘဲ လုပ်လုပ်၊အဖျက်သဘောဘဲလုပ်လုပ် မဟုတ်တာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ပြည်ထောင်စု
ဝန်ကြီးဦးတင့်ဆန်းဆီ လိပ်မူလို့ တိုင်မှာဘဲ။စောင့်ကြည့်ဖို့ လူလွှတ်ပြီးသားပါကွာ။
ဆရာကြီးတော့ မဟုတ်ရပါဘူး ….
မောင်မိုးဒီတို့ ရွာအသင်းဆိုနှနှစ်ဆက်တိုက် ဗိုလ်လုပွဲတက်တယ်။ဒီနှစ်မြို့ နယ်အသင်းတွက်လူရွေးပွဲမှာ ပါဝင်မကစားနိုင်ကြတော့ဘူး။
ပွင့်လင်းရာသီရောက်လာတော့ ပိုက်လုပ်ငန်းနဲ့ ပင်လယ်ထွက်နေကြတော့ ကစားသမားတွေက ခုချိန်မကစားနိုင်တော့ဘူးလေဗျာ။
မိုးရာသီဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်တော့ ပြိုင်ဘက်ကင်းက မောင်မိုးဒီတို့လင်းသာရွာလေဗျာ။
အားကစားနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကတော့မပူနဲ့ ဗျာ။တို့ ရွာဖက်အသင်းတွေက ဘောလုံး၊ပိုက်ကျော်ခြင်း
အားလုံးမြို့ ပေါ်အသင်းတွေထက်သာပြီးသားမို့ ရွာပွဲတွေကိုဘဲ အာရုံစိုက်တော့မယ်။နင်တို့ မြို့ လာကစားရတာ
ဟုတ်ပါတယ် ကိုယ့်ညီကိုတို့ 
စသော အမျိုးမျိုးထင်ကြေးပေးနေကြပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ အားကစားအဖွဲ့ အောင်နိုင်ရေးအတွက် စခန်းသွင်းလေ့ကျင့်
ကြရာမှာ ကုန်ကျငွေ (၂၄)သိန်းဆိုတာမှာ ကျေးရွာ၊ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများက ငွေကျပ်(၁၂)သိန်းကောက်ခံပေးရပါတယ်။ဒါပြင့်
မြို့ ပေါ်မှာရော ဆုငွေလှည့်လည်တောင်းခံနေကြရာမှ မသမာမှုပေါ်ပေါက်လာပါက ကိုယ့်ညီကိုတို့ သိရအောင်ပို့ စ်မတင်တော့ဘဲ မန်းတလေးဂေဇက်၏
စည်းကမ်း(၁၁)အရ forum တွင်ရေးသားပေးပါမည်။ကျွန်တော့်အား ခွင့်လွှတ်သည်းခံပေးကြသော ညီကိုရောင်းရင်းများအား
ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ဂါရဝ စကားဆိုပါရစေ။
ခုလိုမျိုး သဘောထားအမှန်လေးကို ကြားခွင့်သိခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုအာရက္ခရေ။အကို့ မလဲ လူ့ တိရစ္ဆာန်ဘဝက
ဘယ်တော့များလွတ်မလဲလို့ ထင်တောင်မထင်ထားမိလေတော့ ။ခုတော့ ယုံရတော့ခက်ကြီးပါလားနော့။ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပါ အကို့ ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။